About Anyị - Tianjin Junya nkenke Machinery Co., Ltd.
Ogo-mbụ, Nmepụta-Ibu ụzọ, Ọrụ-agbanwe agbanwe
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị, na-ahụta na Huanghua City Hebei Province, nke na-ekpuchi mpaghara karịrị 5,000 square mita.
Tianjin Junya nkenke Machinery Co. Ltd bụ a Quality na-agba mbọ enterprise, ọkachamara na n'ichepụta dịgasị nke igwe anaghị agba nchara mgbatị ngwaahịa.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị, na-ahụta na Huanghua City Hebei Province, nke na-ekpuchi mpaghara karịrị 5,000 square mita. Ọ na-ewe awa 2 naanị site n'ụlọ nkwakọba ihe anyị ruo ọdụ ụgbọ mmiri.
Na elu na mbara mmepụta akara, anyị na ngwaahịa nwere ike etinyere maka a sara mbara elu ugwu, dị ka ígwè akụrụngwa, akpaaka akụkụ ahụ mapụtara, mwube ngwaike, ọgwụ na ahụ ike na foodstuff ngwaọrụ, Ngwuputa ígwè na ect.
Nyocha nke Ndagwurugwu White Snake
Na ngwụsị izu na etiti Septemba, ndị ọrụ Junya Precision Machinery Company niile ndị ọrụ gara White Snake Valley maka otu ụlọ ọrụ iji kwalite nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ma mee ka ndụ ndị ọrụ nke ezumike bụrụ ihe ọghọm, mgbe arụ ọrụ nrụgide gasịrị, ndị ọrụ nwere ike zuru ike na imega ahụ. Otu na-eto eto ma dị ike nke ihe karịrị mmadụ 20 na-ejikọ aka na Ngalaba Nchịkwa Ndị Ọrụ, Ngalaba Ahịa na Ngalaba Mgbasa Ozi Ọhụrụ iji gaa Panshan "White Snake Valley" iji bido ụlọ otu.
Maka ụlọ otu a, anyị mere ndokwa ịrịgo na ndagwurugwu White Snake, ebe ihu igwe dị jụụ na ebe mara mma. Gbagoo n’elu ugwu iji maa onwe gi aka, kporie ndu mara mma, ma nwekwa ikuku oxygen. N’oge a na-arị ugwu ahụ, ndị ọrụ ahụ nyeere ibe ha aka ma gbaa ibe ha ume, sitekwa na mbọ onye ọ bụla gbara, ndị ọrụ niile rụchara ọrụ a bụ ugwu ugwu.
Ndị ọrụ ahụ abụghị naanị anụrị na anụ ahụ na-enwe ọ happyụ, kama ha na-emekwa ka ibe ha nwee mmụọ. Na ihe omume ahụ, onye ọ bụla kwuru okwu n'ezoghị ọnụ ma kee ọnọdụ njikọta ọnụ.
Gbalịsie ike ịchọta onwe gị ka mma.Ha kwesịrị ịga n'ihu maka nrọ ha n'adabereghị. Oge ga-enye gị ihe niile ịchọrọ ， Anyị na-akpachara anya ma na-echebara ọrụ echiche iji dozie nsogbu maka ndị ahịa anyị.
Na-eto eto na ndapụta
Gaa n'oké ọhịa
Rịgo n'elu mkpọmkpọ ebe
Ihe omuma bu 304, 304L, 316,316L, SF8M, WCB, 14408, wdg.
Investment Nkedo Parts, Ọrụ Valve, Igwe anaghị agba nchara 316 Pipe Dabara Adaba Cross, Igwe anaghị agba nchara Pipe Fittings, Investment Nkedo Raw Ihe, Igwe anaghị agba nchara Gas Ball valvụ,